Izikhala zehhovisi ziyathengiswa futhi ziqashwa eFareham, eHampshire
Uhlu Lwezakhiwo: Izakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi Izikhala zehhovisi Hampshire Fareham
IHhovisi Lentengiso EFareham, Hamphire
Lendawo inesakhiwo esinamakamelo amabili enezitini / izembozo eziphakeme ezakhiwe ngothayela ezungeze uhlaka lwensimbi. Ngo-Circa 2006. Isakhiwo sitholakala epaki leSolent Business, ngaphakathi kweFareham. Isiteshi sesitimela saseSwanwick isitimela esiseduze esiseduze nokuhamba ibanga okulula. Isikhala esikhona ...
buka Izikhala zehhovisi eshicilelwe Inyanga 1 edlule
Ihhovisi Ukuvumela In Fareham, Hamphire
Isakhiwo esizimele sangaphakathi esinezakhiwo ezinama-office anikezela indawo yokuhlala yanamuhla evulekile esitezi sokuqala kanye nesitezi somhlaba esinamaselula esinendawo yokwamukela. Kukhona izikhungo zeWC kuzo zombili izitezi nekhishi eliziqukethe elisesitezi sokuqala.Futly air conditionSuspending ceiling and in ...
Izakhiwo ezintathu ze-Solent Center zibekwe endaweni evuthiwe enamapulangwe, nezinsizakusebenza esizeni kubandakanya nezindawo zokudlela, zokuhlinzeka ngezinketho zokudlela nokuthatha uhambo, umkhuba wamazinyo nabalungisa izinwele. Ukuba seduze kokuhlangana kwe-9 ye-M27, kutholakala cishe amamayela ayi-10 empumalanga ye-So ...
buka Izikhala zehhovisi eshicilelwe Izinyanga 5 edlule
Amahhovisi okuyekisa indawo yangaphakathi kusuka ku-cishe2,454 sq ft * Isakhiwo samanje samahhovisi * Inomoya opholile * Uyatholakala uwonke noma njengezindawo ezihlukene * I-13 yabelwe indawo yokupaka izimoto (iRatio 1: 170 sq ft)
Kutholwe isakhiwo sehhovisi ukuvumela - i-1,258 - i-5,639 sq ft * Indawo ephakathi eFareham * Ukuqashiswa okusha kuyatholakala * Indawo yokupaka eyabelwe * Izikhungo zaseKhishini naseWCUkuthola imininingwane ephelele sicela ubuke incwajana
Kutholwe isakhiwo sehhovisi ukuvumela - i-1,258 - i-2,516 sq ft * Indawo ephakathi eFareham * Ukuqashiswa okusha kuyatholakala * Indawo yokupaka eyabelwe * Izikhungo zaseKhishini naseWCUkuthola imininingwane ephelele sicela ubuke incwajana
Amahhovisi okuvumela i-1,168 - i-20,281 sq ft * Izibonelelo ezitholakalayo * Indawo yokuhlala yanamuhla yamahhovisi * Indawo yokupaka izimoto ehlanganisiwe * Iyatholakala iyonke noma njengezindawo ezihlukile * Ezilungele ukusetshenziswa kwenye indawo (stp) ngolwazi olugcwele sicela ubuke incwajana
Kutholwe isakhiwo sehhovisi ukuvumela - i-1,553 - i-3,106 sq ft * Indawo ephakathi eFareham * Ukuqashiswa okusha kuyatholakala * Indawo yokupaka eyabelwe * Izikhungo zaseKhishini naseWCUkuthola imininingwane ephelele sicela ubuke incwajana
Indawo ephansi yehhovisi kufanele isungulwe - I-1,258 sq ft * Indawo ephakathi eFareham * Ukuqasha okusha kuyatholakala * Ukupaka okwabiwe * Izakhiwo zasekhishini naseWCFor imininingwane ephelele sicela ubuke incwajana
An ihhovisi imvamisa iyigumbi noma enye indawo lapho kwenziwa khona umsebenzi wokuphatha, kepha futhi ingasho isikhundla enhlanganweni enemisebenzi ethile enamathiselwe kuyo (bona umphathi, umphathi-wehhovisi, isikhulu); eyokugcina empeleni ingukusetshenziswa kwangaphambilini, ihhovisi njengendawo yasekuqaleni ebhekisele kuyo indawo yomsebenzi. Lapho sisetshenziswa njengesijobelelo, igama elithi "ihhovisi" lingasho imisebenzi ehlobene nebhizinisi. Ngokubhaliwe kwezomthetho, inkampani noma inhlangano inamahhovisi kunoma iyiphi indawo enokubakhona okusemthethweni, noma ngabe lokho kubakhona, ngokwesibonelo, indawo yokubeka kunokuba kunehhovisi. Ihhovisi yinto yokwakha kanye neyokuqamba; ukuthi ngabe ihhovisi elincane njengebhentshi ekhoneni lebhizinisi elincane kakhulu (bona ihhovisi elincane / ihhovisi lasekhaya), ngokusebenzisa izitezi zonke zezakhiwo, kuze kufinyelele futhi kufaka phakathi izakhiwo ezinkulu ezinikezelwe inkampani eyodwa. Ngamagama sanamuhla ihhovisi livame ukubhekisele endaweni lapho kuqashwa khona abasebenzi abasebenza emhlophe. NgokukaJames Stephenson, "IHhovisi yingxenye yebhizinisi elinikelwe ekuqondisweni nasekuxhumaniseni imisebenzi yalo ehlukahlukene."
IFareham (i-FAIR-)m) iyidolobha lemakethe elisenyakatho nentshonalanga yePortsmouth Harbour, phakathi kwamadolobha ePortsmouth neSouthampton eningizimu empumalanga yeHampshire, eNgilandi. Inikeza igama layo kwiBorough of Fareham. Ngokomlando bekungumkhiqizi obalulekile wezitini, obesetshenziselwa ukwakha iRoyal Albert Hall, kanye nokutshala ama-sitrobheli nezinye izithelo zesizini. Abaqashi bamanje bahlanganisa iFareham Shopping Center, abakhiqizi abancane, i-HMS Collingwood neLabour Science Science Technology.